China Inishuwarenzi Bhendi Fekitori Zvakananga Wholesale Yoga Tension bhandi kusimba vagadziri uye vanotengesa | Meiao
nhema, tsvuku, bhuruu, girini, yero
5bb.10lb, 15lb, 20lb, 30lb
Mubvunzo: Kune akawanda asina kukodzera kugwinya michina mumusika, ungaita sei kuti uve nechokwadi chehunhu hwako
A: Tine yedu resistive yekubata skrini fekitori uye capacitive inobata skrini fekitori, iyo yakavhurika
Mubvunzo: Zvakadii nezve kugona kwako kugadzira, uye ungaita sei kuti uve nechokwadi chekuti nhumbi dzangu dzinenge dziri kuendesa
A: MeiAo mitambo ine zvinopfuura 6700 mativi emamirimita uye 8 mitsara yekugadzira inomhanya mazuva ese, 2 mashifiti
Mubvunzo: Ini ndinogona kuisa diki diki yekutanga kekutanga kuyedza mhando?
A: Kurongeka kudiki kunogamuchirwa, uye zvimwe zvigadzirwa zvatinopa sampuro kuyedza zvigadzirwa zvedu zvemhando yepamusoro.
Q: Ndinogona kushanyira fekitari yako?
A: Wako unogamuchirwa kushanyira fekitori yedu.
Mubvunzo: Inguva yakareba sei kugadzirira odha?
A: Tine zvakawanda zvigadzirwa zvirimo. Kazhinji inoda mazuva mashanu kusvika gumi nemashanu, hombe yakawanda inoda kutaurirana.
Mubvunzo: Zvakadii nezvesevhisi yako?
A: Kutumirwa uye muyenzaniso mhando yekutevera inosanganisira nguva yeupenyu.
2021 itsva kwakatangwa zvigadzirwa yokurovedza muviri michina uremu ...
Kuvaka muviri kusanganisa chinogadziriswa chromed dum ...
Wholesale Gym High Quality Kurema Rubber Coated ...
Mavara inopisa kutengesa zvigadzirwa PVC nebwe yokurovedza muviri hex ...
Simba Kudzidziswa Anogadziriswa Dumbbells barbell ...